7 Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu
yi Paulina Joukov
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 17/07/2020)
IYurophu inenkcubeko etyebileyo kakhulu kunye nembali, ukuyenza indawo yokundwendwela ethandwayo phakathi kwabahambi abaphezulu. Imyuziyam, zokulondoloza, Iimpawu zomhlaba ezinomtsalane, kunye nokukhethwa kwezinto ezahlukeneyo zokutyela. Kufuphi, ukuba uthathe umhlala phantsi zininzi iindlela ezintle zokuzihambisa ngokwakho kuso nasiphi na isixeko saseYurophu. kunjalo, zimbalwa kakhulu izixeko ekulula ukuhamba kuzo kwaye uzifumane kubahambi abaphezulu. Xa ucwangcisa iholide yakho eYurophu, Yintoni ekufuneka uyiqwalasele umhambi ngamnye kwinqanaba lakho lokuphila komzimba, Ukufikelela kwe iindawo ezinika umdla zotyelelo ezinkulu kunye nemisebenzi, ezona zithuthi zihamba phambili, ukongeza kuhlahlo-lwabiwo-mali kunye nexesha leholide.
ke, Sikhethe ezimbalwa zezona zixeko zihle ukuba zityelele eYurophu kubahambi abaphezulu. ke, wamkelekile ukulandela uhambo lwethu kwi 7 izixeko ezinobuhlobo eziphezulu eYurophu.
Ukuhamba ngololiwe kulunge kakhulu kwaye i-Eco-Friendly Way yokuhamba. Thi sihloko kubhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti amaxabiso aphantsi Iwebhusayithi kwiHlabathi.
1. Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu: eRoma, ElamaTaliyane
IRoma sisixeko esihle ukutyelelwa eYurophu kubahambi abaphezulu. Isixeko samandulo saseRoma, ezona zinto zinomtsalane, iihotele, kunye neeresityu ziyafumaneka ngokupheleleyo kubadala kwisitulo esinamavili. Oku kuthetha ukuba iindlela zedolophu zonke zineendlela ezihamba ngezitulo ezihamba ngamavili, Isixeko ngokwawo sithe tyaba, ngako oko, nokuba kwinqanaba lokuqina komzimba, uya kukufumanisa kulula kakhulu ukuhamba-hamba.
Ngelixa iRoma iba ninzi kakhulu ngexesha elifanelekileyo, ukuba uhamba ngaphandle kwexesha, ngokuwa, umzekelo, Uya kuba neRoma phantse ngokwakho. Ukwengeza, Ihotele kunye namaxabiso okuhamba athambekele ekuyekeni ngexesha lonyaka, Ngaphezu, awuyi kuba nexhala malunga nokurenta imoto, kuba ungahamba ngokulula ukuya eRoma usuka naphi na apho usiya khona eYurophu ngololiwe. Akukho nto ilunge ngakumbi kune zokuhamba train koololiwe bakaTrenitalia abahamba ngesantya esiphezulu banamhlanje. Ukongeza kwintuthuzelo kunye nenkonzo enkulu yoqeqesho lukaloliwe, ungonwabela izaphulelo ezizodwa kwitikiti labakhweli abadala.
2. UMilan e-Itali
I-Duomo kunye noLeonardo De Vinci '' iSidlo Sangokuhlwa sokugqibela 'yenza iMilan yiparadesi yabathandi bezobugcisa kunye nembali. Ngaphandle kokuba yigugu loyilo, UMilan unobuhlobo kakhulu kubahambi abaphezulu kwaye uphumelele u-a 2016 Ibhaso lokufumana le-EU. Yiyo loo nto iMilan sesinye sezona zixeko zihle ukutyelela eYurophu kubahambi abaphezulu.
Ukuba uphumelele i-60 yakho kwaye ikulungele ukuhlala kamnandi, ke uya kuba nexesha elimangalisayo ngokupheleleyo eMilan. the kwase Italian, i izakhiwo emangalisa zeBasilicas, zobuciko, kwaye iimyuziyam ziya kukwenza uzive ngathi ngowasebukhosini. Xa useMilano, Ngokuqinisekileyo kufuneka ujoyine iklasi yokupheka ye-pasika kuba akunakuze kube kudala kakhulu ukuba ufunde iresiphi efanelekileyo yesosi yokupheka ukuze ukwazi ukuphinda ubuyisele kwakhona la dolce vita ekhaya.
3. Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu: wasebenzisa, Bheljiyam
Abanye bathi iBruges sesona sixeko siphakathi silondolozwe eYurophu. Izitalato zeCobblestone, izindlu ezinemibala, Uyilo lwe-gothic, Zonke zenza iBruges indawo elungileyo yokundwendwela eYurophu kubahambi abaphezulu. Ngaphezu, kukho imijelo apho ungathabatha uhambo lokuhamba ngolwandle kwaye uncume iBruges ngaphandle kokwenza inyathelo, amava nawaphi na aphezulu aya kuthanda. kodwa, ukuba usafuna ukufumana isixeko ngeenyawo, Akukho maxhala, IBruges sisixeko esine compact. ke, ilungile kubahambi abaphezulu nakweliphi inqanaba lomzimba.
Kuya kufuneka unikezele ubuncinci 3-4 iintsuku zokuhamba ngenqanawa 80 yemijelo yesixeko kunye nokuphumla echibini leMinnewater. Omnye umsebenzi obalaseleyo eBruges yimakethi yentengiso yezinye izinto zosapho.
Isikhululo sikaloliwe esiphakathi eBruges malunga 10-20 imizuzu’ ukuhamba ukusuka kumbindi wesixeko, ke ungahambela naphi na eBelgium nase-UK.
IBrussels ukuya eBruges ngololiwe
I-Antwerp ukuya eBruges ngoLoliwe
IBrussels ukuya eVienna ngoLoliwe
Ghent ukuya eBruges ngoLoliwe
4. Baden-Baden, Jemani
Ngoololiwe abavela eParis, Basel, Zurich, kunye neMunich, Idolophu yaseBaden-Baden ifikeleleka kakhulu kubahambi abahamba phambili. Ngelixa ayisiyiyo isixeko esikhulu sedolophu efanayo neBerlin, sisiseko sobomi obuhle. IJamani likhaya kuyo 900 iiholide zokuchithela, kodwa iiholide zeBaden-Baden kwaye iklasi ziphume ziphela.
Iholide ye-spa eBaden-Baden lukhetho olufanelekileyo lweholide kubahambi abaphezulu eYurophu. Isantya sokuthula, amachiza amayeza amayeza aminerali kunye namatope odaka, izitiya ezintle njengeparadesi, yenza iqhekeza lezulu. kunjalo, ukuba uyathanda ukuhlala usebenza kwiiholide, ke kukho iigalufa kunye neeklabhu zemidlalo kwi Baden-Baden undwendwela.
Abahambi abakhulayo eYurophu banokufumanisa kunzima ukuba izixeko ezininzi zihambe, ngenxa yeenduli kunye neendlela ezixineneyo. ke, kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuba isixeko samaphupha akho sihamba phambili kubuchule bakho bomzimba. Ukuhamba uye kwisixeko sase-Yurobhu saseYurophu esifanelekileyo kubalulekile njenge-inshurensi yokuhamba. Phezulu kwethu 7 izixeko ezindwendwelayo kubahambi abaphezulu uluhlu lubonisa ezona dolophu zifikelelekayo eYurophu kubantu abadala.
IBerlin iye kwiBaden-Baden ngoLoliwe
UMunich ukuya eBaden-Baden ngoLoliwe
I-Zurich ukuya kwiBaden-Baden ngoLoliwe
I-Basel eya kwiBaden-Baden ngoLoliwe
5. Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu: Berlin, Jemani
Imyuziyam kunye neempawu zomhlaba ezinxulumene ne-WWII kunye nemfazwe ebandayo, yenza iBerlin ibe yindawo eyoyikisayo yabahambi abaphezulu eYurophu. IBerlin iflethi kwaye izithuthi zikawonke-wonke zilunge kakhulu, zombini iibhasi kunye nangaphantsi komhlaba. Ukuba ukwinqanaba lomzimba olungileyo, ungasijonga esi sixeko kukhenketho lukaSegway.
Iipaka ezininzi zeBerlin ziluhlaza zilungele ukuhamba kwemini kunye nepikniksi, kunye neegalari zobugcisa kukhetho olukhulu ukuba ukhetha into ethe cwaka ngakumbi kunye nenkcubeko kunokujikeleza iziko elixakekileyo.
6. Amsterdam, Inetherlands
Ngamajelo ayo amahle, IAmsterdam ihlala iyindawo entle yokundwendwela abahambi abaphezulu eYurophu. IAmsterdam sesinye sezona zixeko zibalulekileyo Utyelelo eNetherlands, Enkosi ngee-vibes zayo ezivuselelekileyo kunye nobungakanani. IAmsterdam incinci xa ithelekiswa nezinye izixeko zaseYurophu, ke awudingi ukuba ubaleke kwaye ukhathazeke ngokubona.
Ukuba udiniwe ngumzi oxakekileyo, entloko ngaphandle kwedolophu kwimayile eyaziwayo okanye emasimini eTulip, ukuba uhamba ngexesha lasentwasahlobo. Okanye ukuba ukwimo entle yomzimba, ukuqasha ibhayisekile kwaye ukuhamba ngebhayisikile ujikeleze umzi onomtsalane lumbono eyoyikisayo.
7. Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu: Vienna, Ostriya
Uyilo olunomtsalane, opera, kunye nebhotwe lasebukhosini lenza iVienna yindawo entle yokundwendwela kubahambi abaphezulu. Ukuba ufikelele kweloo xesha lamahala lamaxhala ebomini xa ungahlala nje uyonwabele iziqhamo zomsebenzi onzima, emva koko uye eVienna. Ngaphezu, I-Vienna sesona sixeko sesibini esifikelelekayo eYurophu kubakhenkethi abaphezulu abanokuhamba okulinganiselweyo.
Izindlu zekofu zase-Austrian 'ngamagumbi okuhlala' anika iikhekhe kunye ne-Austin schnitzel, qinisekisa ukuba ngokuqinisekileyo uya kuba namava ophoxo angalibalekiyo. Ngenxalenye yenkcubeko yohambo ndwendwela indlu entle kakhulu ye-opera ngomboniso. Emveni kwakho konke, IVienna kulapho uMozart noSchubert baqokelela khona iziqwenga zabo ezintle, umzi womculo kunye nezobugcisa.
Ibhotwe laseBelvedere yenye yeendawo ekumele ukuba zibonwa eVienna, ujikelezwe ziigadi zeentyatyambo kunye nemithombo, yindawo yokuhlala ngasemva kwaye wonwabe.
Indawo yesixeko ilungile 5 imizuzu kude kwesona sikhululo sikaloliwe. ke, ukuba uza evela kumazwe angabamelwane, akukho nto ilula ngaphandle kokuya eVienna.
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane ezona xabiso lixabiso eliphantsi lamatikiti kaloliwe kunye neendlela zokuhamba kuzo naziphi na izixeko kuluhlu lwethu.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “7 Ezona zixeko ziBalulekileyo kwiYurophu Ukutyelelwa Abahambi abaphezulu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/europe-visit-senior-traadors/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
I'm a passionate writer, fierce solo traveler and blogger. I believe that language and words are powerful tools that can inspire and create new worlds. I love traveling and sharing my journeys through my stories with other women around the world - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam